Qalabka kuleylka kuleylka ee indha-indheynta loogu talagalay brazing, dhalaalida, lifaaqa, dhejinta, iwm.
Bogga ugu weyn / kuleylka kuleylka kulaylka badan / Qalabka Kuleylka Induction
Category: kuleylka kuleylka kulaylka badan Tags: soo iibso qalabka kululaynta induction, kululeeyaha joogtada ah, nidaamka kuleylka kuleylka badan, qalabka kuleylka kuleylka kuleylka, Qalabka kuleylka induction, kululeeyaha induction, kululaynta induction, codsiga qalabka kululaynta induction, Qiimaha qalabka kululaynta induction, Qalabka kululaynta induction, matoor kuleylka dhalinta, nidaamka kuleylka induction
Soo-saarista Qalabka Kuleylka Kuleylka
HLQ Mashiinka Kuleylka Kuleyliyaha wuxuu soo saaraa noocyo kala duwan oo ah Qalabka kululaynta induction oo ay ka mid yihiin taxanaha korantada ee korantada, taxanaha korantada qadadka, kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka, kuleylka, boodhka, boodhka, dhajinta, alxanka, adkaynta iyo kululaynta daaweynta dalabka iyo bedelka.
Aragtida qalabka kululaynta induction
Qalabyadan kululaynta induction, wareegga wareegga wareegga oscillating ayaa lagu dabaqayaa, iyada oo loo marayo tarjumaadaha soo noqnoqda sareeya, danab hooseeya iyo awoodda hadda jirta ee sare ayaa la soo saaraa si loo maro dhex-dhexaadinta induction.
Mashiinnada taxanaha ah ee 'DW-HF-15KW' iyo 'DW-HF-25KW' waa noocyada ugu horreeya ee lagu horumariyo shirkadeena, iyadoo la adeegsanayo qaybaha MOSFET iyo IGBT iyo jiilkeenna ugu horreeya ee rogaya tiknoolajiyada xakamaynta, mashiinnada waxaa lagu soo bandhigay qaab dhismeed fudud, kalsooni sare iyo qiimo hoose, iyo way fududahay in la isticmaalo iyo in la dayactiro, hadana waa mashiinada ugu isticmaalka badan Shiinaha iyo dibadaba.
In taxanaha DW-HF-35KW iyo DW-HF-45KW kululaynta induction mashiinada, moduleka IGBT iyo jiilkeena labaad ee farsamada kontoroolka rogaya ayaa la isticmaalay, taasi waa laba koontaroolida iyo tiknoolajiyada rogaya. Teknoolajiyadaan cusub, awoodda wax soo saarka iyo soo noqnoqoshada oscillating si madaxbanaan ayaa loo xakameeyaa. waxaan u adeegsanaa qaybaha IGBT iyo danab badan oo koronto xakameeya wareegga xakamaynta si aan u xakameyno awoodda waxaanna u adeegsannaa qaybaha IGBT, taxanaha oscillating iyo wareegga baafinta otomaatiga ah si loo gaaro beddelidda jilicsan ee koorsada rogitaanka, kuwan oo dhan waxay ka dhigayaan mashiinka inuu noqdo mid lagu kalsoonaan karo oo mashiinka ka dhigaya mid macquul ah in si joogto ah loola shaqeeyo wareegga waajibaadka 100%.
Marka la barbardhigo mashiinada leh jiilka koowaad ee tikniyoolajiyadda, tikniyoolajiyadda jiilka labaad waxay ku habboon tahay mashiinnada awoodda weyn si loo helo kalsooni sare.
Qaadashada tikniyoolajiyadda horumarsan awgeed, mashiinnada taxanaha ah ee DW-HF-35KW iyo DW-HF-45KW waxaa lagu soo koobay noocyo badan oo isdaba joog ah, cabir yar, biyo-qaboojiye la qaboojiyey, kalsooni sarreysa iyo qiimaha dayactirka oo hooseeya.
Gudaha taxanaha DW-HF-70KW qalab kululaynta induction, Moduleka IGBT iyo jiilkeena seddexaad ee tikniyoolajiyada xakamaynta roonaanta ayaa la isticmaalay, taasi waa jilicsanaanta iyo labalaabinta iyo tikniyoolajiyadda rogida. Tiknoolajiyaddan, awoodda wax soo saarka iyo soo noqnoqoshada waa la xakameyn karaa oo si gooni ah ayaa loo hagaajin karaa, IGBT moduleka iyo tiknoolajiyada xakamaynta beddelka jilicsan ayaa loo isticmaalaa wareegga wareegga isbeddelka sare si loo xakameeyo awoodda wax soo saarka. Wareegga wareejinta, IGBT iyo wareegga baafinta soo noqnoqda ayaa lagu dabaqay si loo gaaro xawaare sare iyo xakameyn jilicsan oo jilicsan. Ansixinta tiknoolajiyada cusub ma aha oo kaliya inay hagaajiso tayada iyo kalsoonida mashiinka ， laakiin sidoo kale waxay xallisaa dhibaatada teknolojiyadda ee xoogga weyn mashiinka kuleylka dhalinta waxayna suurtogal ka dhigeysaa in la shaqeeyo 100% wareegga waajibaadka.